अफगानिस्तानको काबुलमा फेरी बम आक्रमण , ३० जना मारिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अफगानिस्तानको काबुलमा फेरी बम आक्रमण , ३० जना मारिए
बीबीसी । विद्रोही तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल र कान्दाहार जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्गमा पर्ने गज्नी सहरमा आक्रमण गर्दा कम्तीमा ३१ जनाको मृत्यु भएको छ। तालिवान लडाकुहरूले गजनीका केही भागहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रान्तीय सरकारका अनुसार सो आक्रमणमा ३० तालिवान लडाकु र एक सरकारी सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। धेरै घरहरू क्षतिग्रस्त भएकाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्नसक्ने देखिएको छ ।
गजनीमा अहिले विशेष सुरक्षा फौज खटाइएको छ । केही वर्षयता कुनै प्रान्तीय सदरमुकाममा तालिबानले आक्रमण एवम् प्रवेश गरेको यो चौथो पटक हो। केही महिनाअघि तालिवान लडाकुहरूले छोटो समयका लागि पश्चिमी नगर फराह आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सन् २०१५ र २०१६ मा लामै समय उनीहरूले उत्तरमा रहेको कुन्डुज आफ्नो नियन्त्रणमा राखे। अमेरिकी सेनाको एउटा सहयोग अभियानले तालिबानलाई गल्नबाट लखेट्न हेलिकप्टरहरू र एउटा ड्रोन परिचालन गरिएको बताएको छ। गज्नीमा डेढ लाख मानिसहरू बसोबास गर्छन्।